Kutheni Ndimele Ndibancede Abanye? | Ulutsha Luyabuza
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMoore IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOssetia IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUmbundu IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu isi-Igbo
Iimfihlelo ezimbini ezingaziwayo ngabantu abaninzi
Ndingabanceda njani abanye?
Imfihlelo #1: Xa usipha abanye, nabo baya kukupha!
Abantu baya kuqaphela ukuba unesandla esivulekileyo. Ngenxa yoko nabo baya kukupha izinto. IBhayibhile iyibeka ngolu hlobo le nto:
Imfihlelo #2: Xa unceda abanye, uyazinceda nawe!
Ukwenzela abanye izinto ezintle kukunceda uzithembe kwaye waneliseke. IBhayibhile iyibeka ngolu hlobo le nto:
“Xa usenza itheko, mema amahlwempu, izilima, iziqhwala, iimfama; yaye uya kuba noyolo, ngenxa yokuba abananto bangakubuyekeza ngayo.”—Luka 14:13, 14.
Luninzi ulutsha olubakhathaleleyo abanye! Nantsi eminye imizekelo.
“Ngamanye amaxesha, xa ndibawela ukuziphosa esofeni ndibukele iTV, ndiye ndicinge ngomama notata abasemsebenzini, nendlela abaza kube bedinwe ngayo xa bebuya. Ngoko ndiye ndiphakame, ndihlambe izitya, nditshayele, ndosule nothuli. Ndibilisa namanzi ekofu, kuba abazali bam bayayithanda. Xa umama efika uye athi, ‘Yhu akusekuhle apha! Loo nto kunuka kamnandi. Enkosi mntanam!’ Kundivuyisa kakhulu ukwenzela umama notata izinto ezintle ngolo hlobo.”—UCasey.
“Abazali babesoloko bendixhasa, bendinceda ngayo yonke into endiyidingayo. Xa baba neengxaki zemoto kulo nyaka uphelileyo, ndabapha imali kwebendiyigcinile ukuze ilungiswe. Kakade ke, bazama ukwala kodwa ndandingafuni nokuva. Kufana nokungathi andibenzelanga nto. Kundivuyise kakhulu ukubanceda.”—UHolly.
Ngaba ubusazi? Ulutsha oluninzi olungamaNgqina kaYehova luye lwafumana uvuyo olukhulu ngokunceda abanye bayazi iBhayibhile. Olunye lude lwafudukela kumazwe adinga abashumayeli abangakumbi.
“Ndafudukela eMexico, ndisuka eUnited States, ndize kushumayela. Ngamanye amaxesha kunzima ukupha abantu imali okanye izinto zexabiso kuba andinazinto zingako. Kodwa, ndiye ndafumanisa ukuba, xa ndiphisa ngexesha namandla am ndishumayela, abantu baba nombulelo ongaphezu kwalo wokubapha izinto zexabiso.”—UEvan.
Ngaba ungathanda ukufumana uvuyo lokunceda abanye? Nanga amacebiso ambalwa.
Ukunceda intsapho yakho:
Tshayela, hlamba izitya okanye ucoce indlu—ungakhange ucelwe
Bhalela abazali bakho ikhadi elibancomayo
Nceda umntwana wakowenu ngomsebenzi wakhe wesikolo
Ukunceda abo bangengabo abakowenu:
Thumela ikhadi kumntu ogulayo
Nceda ummelwane osele ekhulile ekucoceni iyadi yakhe
Tyelela umntu ogulayo
Thenga isipho uze usinike umntu onzinyelwe bubomi
Icebiso: Khawuze nawakho amacebiso. Zimisele ukunceda okungenani umntu omnye kule veki. Mhlawumbi ingakothusa indlela oya kuvuya ngayo!
“Xa unceda abanye uyonwaba. Uziva uphumeze into enkulu, kwaye uyabona ukuba abanye bayayixabisa. Ungonwaba ngoxa unceda omnye umntu, nakubeni ekuqaleni ubungacingi ukuba kuza kuba njalo. Loo nto uyenzileyo, usenokungayijongi njengokuzincama, ngoba ekugqibeleni nawe uye uzuze lukhulu.”—UAlana.
Indlela Endiceba Ukubanceda Ngayo Abanye
Lutsha—Niza Kwenza Ntoni Ngobomi Benu?
Ngaba ufuna ukuphila ubomi obanelisayo? Phulaphula njengoko uCameron esibalisela indlela awalufumana ngayo ulwaneliseko kwindawo ebengakhange ayilindele.